Harley Quinn - ဝီကီပီးဒီးယား
This article is titled in another language/script, because there is no suitable name in Myanmar language yet.
ဤ ဆောင်းပါးသည် မည်သည့် ကျမ်းညွှန်း (သို့) အကိုးအကား ကိုမှ ရည်ညွှန်းထားခြင်းမရှိပေ။ ကျေးဇူးပြုပြီး စိတ်ချယုံကြည်နိုင်လောက်သော အချက်အလက်ရင်းမြစ် များကို ကိုးကားရည်ညွှန်း၍ ဤဆောင်းပါးကို မွမ်းမံ ပေးပါ။ အကိုးအကားမပါသော အချက်အလက်များသည် စောဒကတက်ခြင်းခံရနိုင်ပြီး ဖယ်ရှားခြင်းပါခံရမည်ဖြစ်သည်။
ဤဆောင်းပါးကို ဝီကီစံနှင့် ကိုက်ညီစေရန် ပြင်ဆင်တည်းဖြတ်ရန် လိုအပ်နေသည်။ အကယ်၍သင်ပြင်ဆင်နိုင်ပါက ဤဆောင်းပါးအား တိုးတက်စေရန် ကျေးဇူးပြု၍ ပြင်ဆင်ပေးပါ။ ဆွေးနွေးချက် စာမျက်နှာတွင် အကြံပေးမှုများ ပါဝင်လိမ့်မည်။
Harley Quinn သည် DC Comics မှ ထုတ်ဝေသော အမေရိကန် စိတ်ကူးယဉ် ကာတွန်း ဇာတ်ကောင်တစ်ဦး ဖြစ်သည်။ ရူးကြောင်ကြောင် လူဆိုး Joker စရိုက်နှင့် မိန်းကလေး တစ်ဦး ဖြစ်သည်။ Harley Quinn သည် supervillain မဖြစ်မီက Dr. Harleen Frances Quinzel, M.D. အမည်ရှိ စိတ်ပညာဆရာဝန်မလေး ဖြစ်သည်။ Arkham တွင် Joker ဆေးရုံတက်နေစဉ်၌ တွေ့ဆုံကြုံကြိုက်သွားပြီး လူဆိုးမလေး ဖြစ်သွားခဲ့သည်။ Harley သည်လည်း Joker ၏ ချစ်သူအဖြစ်ဖြင့် နာမည်ကြီးကာ လူအများမှ ကြောက်ရွံ့ခြင်း ခံရသည်။
လင်းနို့လူသားရဲ့ စွန်းစားခန်းများ အပိုင်း၁၂ (စက်တင်ဘာ၊ ၁၉၉၉)
Paul Dini Bruce Timm
Harley ဟာ အဆိပ်ပြီးသူ တစ်ယောက်ဖြစ်ပါသည်။ Harley ကို အဆိပ်ခတ်လို့မရပါ။ အဆိပ်မြှားတွေ အဆိပ်ငွေ့တွေနဲ့ Harley ကို သွားတိုက်ခိုက်၍မရနိုင်ပါ။ ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်းမှ Harley အဆိပ်မိပြီး သေမလိုဖြစ်တုန်းက Poison Iyv က သူမကိုကယ်တင်ရင်းရာကနေ Harley ကို ဘယ်အဆိပ်မှ မတိုးတော့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ပြီးတော့ Harley က Olympic ကျွမ်းဘားကစားသမားတစ်ယောက်ထက် ကျွမ်းဘားတို့ အမြင့်ခုန်တို့ ကျွမ်းကျင်ပါသည်။ အန္တရာယ်များလွန်းတဲ့ အမြင့်တွေကို Harley ကသည် လွယ်လွယ်သာသာ ခုန်တက် ခုန်ချလို့ရပါသည်။ ထိုစွမ်းရည်များကြောင့် ရန်သူသည် သူမလက်က ပြေးထွက်ဖို့မလွယ်နိုင်ပါ။ Joker ကိုတောင် ကိုင်တွယ်ခဲ့တဲ့ စိတ်ပညာဆရာဝန်မလေးဖြစ်ပါသည်။ သူမနဲ့ စကားပြောတာတွေ ဉာဏ်ပညာယှဉ်တာတွေ လုပ်လာသော ရန်သူများ (လင်းနို့လူသားအပါအဝင်) ဒုက္ခရောက်သွားကြသည်။ Aman Waller (Suicide Squad Team Leader) က တစ်ခါတစ်လေမှာ Harley ကို Genius ဟုတင်စားတတ်သည်။ လက်နက်ကြီး လက်နက်ငယ်တွေကို professional ဆန်ဆန် အသုံးပြုနိုင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါသည်။ ဘယ်သူမှ အသုံးမပြုတတ်တဲ့ Batman ရဲ့ လက်နက်တွေကို အသုံးပြုနိုင်သူလဲဖြစ်ပါသည်။ အဆိပ်တွေကိုလဲ ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ Harley ဟာ ရန်သူနဲ့ ရင်ဆိုင် တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်လဲ လုံလောက်တဲ့ ခွန်အားနဲ့ လျင်မြန်ဖျတ်လတ်မှူတွေ ပိုင်ဆိုင်ထားသော အမျိုးသမီး လူကြမ်းတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Harley_Quinn&oldid=518054" မှ ရယူရန်
၃၁ မေ ၂၀၂၀၊ ၁၈:၂၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၃၁ မေ ၂၀၂၀၊ ၁၈:၂၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။